» जिजिबिसा ! क्यान्सरले दिएको नयाँ जीवन,-मनिषा कोइराला ( भिडियो सहित) जिजिबिसा ! क्यान्सरले दिएको नयाँ जीवन,-मनिषा कोइराला ( भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
जिजिबिसा ! क्यान्सरले दिएको नयाँ जीवन,-मनिषा कोइराला ( भिडियो सहित)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा छ । काठमाडौं । प्रतिकुलतालाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्न सक्ने मानिसहरु कमै हुन्छन् । त्यसका एउटा मूर्त उदाहरण हुन्, पोखरा लह चोकका २४ वर्षीय सुजन थापा मगर । कुरा आजभन्दा करिब ८ वर्ष अघिको हो । टेलिभिजन र फिल्ममा देखिने कालाजादुबाट प्रभावित भएर ९ कक्षामा पढिरहेका सुजनलाई पनि कालाजादु सिक्ने हु’टहुटी चल्यो ।